လိင်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်တိုးတက်မှုများနှင့်အတူဤသည်နေ့ရက်ကာလ,သင်ကကိုယ့်ကိုကိုယ်ကစားရန်အခွင့်အလမ်းများအတွက်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်တက်ပေးခြင်း၏ခြေလှမ်းယူမှာမဟုတ်ဘူးလျှင်တစ်ဦးအရှက်ကွဲခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ရှိသမျှစိတ်ကူးယဉ်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်စိတ်ကြိုက်သည်အဘယ်မှာရှိရေနွေးငွေ့ညစ်ညမ်းဂိမ်းအသစ်လိင်ဂိမ်း၏ပြီးပြည့်စုံသောစုဆောင်းခြင်းပေးပါ။ ဤဆိုဒ်တွင်အမျိုးအစားများစွာရှိသည်၊ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းတွင်ကစားရန်လာသူမည်သူမဆိုသည်သွေးစုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပရောပရည်ပြုလုပ်ရန်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ရှိလိမ့်မည်။, ကျနော်တို့အများဆုံးပါဝင်နိုင်ဆိုဒ်များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်,နှင့်ဖြောင့်ညစ်ညမ်းဂိမ်းမှတပါး,ငါတို့သည်သင်တို့လိုအပ်စေခြင်းငှါလူအပေါင်းတို့သည်ကွီး,လိင်တူချစ်သူဂိမ်း,လိင်တူချစ်သူဂိမ်းများနှင့်ပင်လိင်ဂိမ်းများအပါအဝင်. ကျနော်တို့တောင်မှစိတ်ကူးယဉ်သို့မဟုတ်နဂါးစွန့်စားသို့သောသူလူတိုင်းအတွက်ဂိမ်းများရှိသည်။
ထိုအခါငါတို့သည်လိင်ဂိမ်းကစားခြင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့ပျော်မွေ့ချင်သူလူတိုင်းအဲဒီလိုလုပျနိုငျဘယ်မှာပွင့်လင်းပလက်ဖောင်းနှင့်အတူလာကြ၏။ အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်နှင့်မျှမငွေပေးချေမှုတောင်းဆိုမှုများရှိပါတယ်။ သင်ရုံကဒီမှာလာနှင့်ချက်ချင်းကစားစတင်နိုင်ပါသည်။ သင်သည်တစုံတခုကိုဒေါင်းလုဒ်သို့မဟုတ်တပ်ဆင်ရန်မလိုပါအပေါင်းတို့နှင့်ဤဂိမ်းဖြောင့်သင့်ရဲ့ဘရောက်ဇာသို့အပြေးနေကြသည်။ သူတို့ကအစသင်အသုံးပြုစေခြင်းငှါမဆိုကိရိယာပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်,ကကွန်ပျူတာတစ်ခုသို့မဟုတ်မက်ကကွန်ပျူတာဖြစ်,အန်းဒရွိုက်သို့မဟုတ်အိုင်ကွန်စက်ကိရိယာ. အခမဲ့ပျော်မွေ့ရန်ဤဂိမ်းအားလုံးကိုမပေးမီသင့်ထံမှကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာသင်အသက် ၁၈ နှစ်ကျော်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုချက်ဖြစ်သည်။, သင်ပြုပြီးတာနဲ့,သင်ပူးတွဲပါမျှကြိုးနှင့်အတူဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်မသာ,သင်မူကားလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုသုံးပါနှင့်ကိုယ့်သင်ကဲ့သို့အခြားမြူနီစီပယ်ကစားသမားတွေနဲ့အပြန်အလှန်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်ဝဘ်ပေါ်ရှိမတူကွဲပြားသောစာကြည့်တိုက်တစ်ခုရှိသည်။ လူအပေါင်းတို့သည်အမျိုးအစားကနေဂိမ်းနှင့်အတူကျနော်တို့ဤမျှလောက်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်ပေါ်တွင်သင်၏စိတ်ကူးယဉ်စိတ်တော်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ သင်ရုံတစ်စုံတစ်ဦးကဲ့သို့ခံစားရချင်လျှင်၊အဘယ်သူမျှမကိစ္စ၊သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကို၏လိင်နှင့်အတူဒါလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းကိုသင်လိုချင်သို့သော်သင်ဇာတ်ကောင်များပါစေလိမ့်မည်မသာ,လိင်ကစားစရာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နှင့်လုပ်ရပ်စဉ်အတွင်းကျိကျိကျိအမျိုးမျိုး,ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းထဲမှာစိတ်ကြိုက်မီနူးသင်သည်သင်၏အိပ်မက်များ၏လိင်မိတ်ဖက်ဖန်တီးပါစေပါလိမ့်မယ်။, ဂိမ်းအချို့သည်ကျော်ကြားသောအရေခွံများဖြင့်လာသည်၊သင်သည်ရုပ်ရှင်များ၊တီဗီရှိုးများ၊ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ကာတွန်းများနှင့်ပင်ကာတွန်းများမှဇာတ်ကောင်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။
သင်ရုံလိင်ထက်ပိုတစ်ခုခုချင်လျှင်,ငါတို့သည်ငါတို့၏ဂိမ်းအမျိုးအစားရှိသည်။ ဤအမျိုးအစားတွင်သင်လက်တွေ့ကျသောလိင်ချိန်းတွေ့ခြင်းဂိမ်းအချို့ကိုတွေ့လိမ့်မည်၊သင်သည်ကြက်သီးမွေးညှင်းများဖန်တီးပြီးမြေပုံပေါ်တွင်ထွက်သွားနိုင်သည်၊အခြားဇာတ်ကောင်အမျိုးမျိုးအပေါ်ရိုက်ပြီးသူတို့နှင့်ဆက်ဆံရေးအမျိုးမျိုးကိုစတင်လိမ့်မည်။ ငါတို့သည်လည်းအိပ်မက်အခြေအနေအမျိုးမျိုးတို့ကိုနှစ်သက်တော်မူမည်သောဤအမျိုးအစားအတွက်စိတ်ကူးယဉ်ကွင်းနှင့်အတူလာကြ၏။ မဖွယ်မရာစိတ်ကူးယဉ်,ဆရာသို့မဟုတ်ရုံးလိင်စွန့်စားများ၏ကြင်နာသင့်ရဲ့အခမဲ့လိင်ပြွန်ကကမ်းလှမ်းမယ့်အရာကိုထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်အပေါ်အများကြီးပိုစွဲငြိဖွယ်ရာလမ်းအတွက်ခံစားနိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့ဒီနေ့ရဲ့ညစ်ညမ်းပန်ကာများအတွက်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုပူဇော်ဖို့ဒီဆိုဒ်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်အညွှန်းငါတို့သည်ငါတို့၏စာကြည့်တိုက်၏အပြင်အဆင်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏တူညီသောစတိုင်ကိုအသုံးပြုသောကြောင့်,သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးလိင်ပြွန်ကနေရသောအရာကိုဆင်တူသည်။ အကြောင်းအရာအားလုံးကိုစနစ်တကျထည့်သွင်းထားပြီးဂိမ်းများအတွက်ဖော်ပြချက်များကိုပင်ရေးသားခဲ့သည်။ သင်ဂိမ်းတစ်ခုရှာတွေ့သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးကစားခလုတ်ကိုထိမှန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းများအားလုံးကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်တွင်ကစားသည်၊သင်ဘယ်တော့မျှပြန်ညွှန်းမည်မဟုတ်ပါ။, သင်တို့သည်လည်းတစ်ဦးချင်းစီဂိမ်းအောက်မှာမှတ်ချက်များရေးသားဖို့ရကြလိမ့်မည်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူမည်သည့်ညစ်ပတ်ခေါင်းစဉ်အကြောင်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာဖိုရမ်တစ်ခုရှိသည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအခမဲ့အဘို့အသငျသညျမှကြွလာနှင့်သင်တို့အဘို့မဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအရှုံးမပေးဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။